सेप्टेम्बर 12, 2018 सेप्टेम्बर 12, 2018 साइन्स इन्फोटेक	3 Comments डा. राम बहादुर बोहरा
के प्रेम केवल एकहोरो हुन्छ ? एक जना युवा नोकरीको तलासमा शहरमा पुग्छ । शहरमा बच्पनको साथीहरुसंग भेट हुन्छ । उसले होटल मेनिजमेण्टको डिप्लोमा गरेको हुन्छ । थुप्रै होटलमा चाहर्दा पनि उसले नोकरी पाएको हुदैन ।
केहि साथीहरुसंग चिया खादा केहि गुण्डाहरूले कोकमा अल्कोहल मिसाएकाले गल्तीले सुन्दर केटीले पिएकी हुन्छे यो वारमा बसेको त्यो नोकरीको तलासमा हिडेको केटाले हेरेको हुन्छ । केहि समएपछि त्यो केटी त्यहाबाट आफ्नो कार नजीक पुग्छे । रक्सी लागेकाले उसले कारको ढोका खोल्न सक्दिन त्यही मौका छोपेर गुण्डाहरूले केटीलाई किडनेप गरेर लगेका हुन्छन् यो देखेपछि केटा त्यो गाडीको पिछा गर्दै जान्छ । अन्तमा उसले भेटाउछ र गुण्डालाई कुटेर भगाउछ ।
रक्सीको नसा उत्रेको र केटाले आफुलाई बचाएको देखेर केटाको गालामा किस खान्छे । सुन्दर केटीले किस खायको देखेपछि उस्को मनमा प्रेम जाग्छ । समए बिद्दै जान्छ केटीसंग घुमफिरमा दिन बितेको केटालाई पत्तै हुदैन तर एकदिन केटीले एउटा काड थमाउदै निमंत्रणामा आउन आग्रह गरिकी हुन्छे । जन्मदिनको पार्टीको खुसीमा केटीका घरवालाले छोरीको विबाहको लागि अमिर केटासंग विबाहको लागि घोषणा गर्छन् र केटाले केटीलाई र केटीले केटालाई औठि लगाई दिएको दृष्य देखेपछि केटा त्यो ठाउँ छोडेर बाहिर निस्कन्छ ।
बर्थडे पार्टीमा साथीलाई नदेखेकाले खोज्दै बाहिर आउछे । किन तिमी बाहिर आएको भन्दा केटाले केटीलाई म तिमिलाई माया गर्छु भन्छ । असलमा प्रेम केटीले अर्को केटासंग गरेको सहन नसकेकाले आई लभ यु केटाले भनेको हुन्छ । यती सुनेपछि केटीले म तिमिलाई साथीको नाता र मलाई बचाएको देखेकाले मात्र तिमिसित हिड्ने गरेको हु भनिछ तर केटाको मनमा केटीप्रति एकहोरो माया बसेको हुनाले त्यहाबाट निस्कन्छ ।
केटाको जीवनमा यो भन्दा पहिलै ठूलो घटना घटेको हुन्छ बाबुआमाले मागेकी केटी विवाह मण्डबबाट अर्कै केटासंग भागेकी हुन्छे । त्यही बेला फोनको घण्टी बढ्छ त्यो फोन पुलिस चौकीबाट आएको हुन्छ । फोनमा एउटा केटीले आत्माहत्या गर्न लाग्दा बचाएर ल्याएको हुनाले केटीले पुलिसलाई केटाको नम्बर दिएकाले पुलिस चौकी पुगेर हेर्दा विवाह मण्डपबाट भागेकी केटी रहेको थाहा हुन्छ । त्यो केटीलाई आमा बुबाको घरसम्म छोडेको हुन्छ । जुन केटाले त्यो केटीलाई धोका दिएको हुन्छ त्यही केटाले पैसाको लालचमा किस खाने केटीलाई पनि मायाजालमा फसाएको रहेछ । केहि दिनपछि केटाको माया देखेर किस खाने केटीले चाहन थालीछ ।
विवाहको मण्डपबाट केटी भागेर केटालाई भेट्न पुगेको हुनाले केटीलाई गाडीमा राखेर विवाह मण्डपमा पुराएको हुन्छ । छोरीले केटालाई नछोड्ने जस्तो देखेपछि बाबुले केटालाई एक करोड रूपयाको लालच दिएर ब्लेङ चेक छोडेर आएको हुन्छ । विवाहमण्डपमा बसेको केटालाई केहि समय केटाले एकान्तमा बस्न पाउने आग्रह गरेपछि सबैको अनुमति लिएर कोटातिर लगेछ । केटीको बाबुले दिएको चेकमा एक करोड रूपमा छ केटी रोज्छसकी पैसाभन्दा पैसा रोजेकाले चेक लिएर केटो बैंकतिर लागेछ । यता केटासंग विवाद सम्पन्न भइसकेपछि केटीले सवै कुरा थाहा पाएपछि खुसी भइछ ।
पहिलो केटालाई चेक थमाई दिएको केहि घण्टामै केटी पक्षले चेक क्यानसिल गरेकाले केटी र पैसा दुवै गुमाएछ । यस्ता घटना समाजमा घटि रहेकाले बाबु आमाले आफ्नो सन्तानको चाहनालाई ध्यानमा राख्न सक्नुपर्छ । छोरा होस या छोरी दुवैको समस्या बुझ्न सके ठूलो घटना घट्नबाट जोगिन सकिनेछ ।
← विज्ञान जगतमा चन्द्रशेखर वेंकटरामनको योगदान के के रहेको छ ?
नाकमा मासु पलाउने रोग र यसको उपचार →
जुन 7, 2019 जुन 7, 2019 साइन्स इन्फोटेक 5
अगस्ट 18, 2019 अगस्ट 18, 2019 साइन्स इन्फोटेक 3
3 thoughts on “के प्रेम केवल एकहोरो हुन्छ ?”
Pingback:प्रेम र यसको परिभाषा – Science Infotech
Pingback:आसन्न प्रेमदिवसको उपलक्ष्यमा अद्भूत प्रेमी Lovebug अर्थात प्रेमकिरोमा हुने समागम
Pingback:माया (Love) को कारण के हो ? किन हुन्छ प्रेमी-प्रेमीका बीच आकर्षण ?